Iska yaree aqoonta filimka - Great Silver Pack (ShenZhen) Co., Ltd.
POF waa nooc ka mid ah filimka kuleylka yareyn kara, inta badan loo isticmaalo baakadaha alaabada leh qaabab joogto ah iyo kuwa aan caadi ahayn. Iyada oo ay ugu wacan tahay ilaalinta aan sunta ahayn iyo deegaanka, hufnaanta sare, yaraanshaha sare, kuleylka-ku-xirnaanta wanaagsan, dhalaalaya sare, adkaanta, iska caabbinta ilmada, Waxay leedahay astaamaha kulaylka kulaylka isku midka ah oo ku habboon baakadaha xawaaraha sare leh. Waa badeecad beddel u ah filim dhaqameedka PVC ee kuleylka yareyn kara. Waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa qalabka baabuurta, alaabada caagga ah, qalabka xafiisyada, buugaagta, elektarooniga, guddiyada wareegga, MP3, VCD, farsamada gacanta, muraayadaha sawirka iyo waxyaabaha kale ee alwaaxda laga helo, Alaabta lagu ciyaaro, sunta cayayaanka, waxyaabaha maalinlaha loo baahan yahay, cuntada, is qurxinta, cabitaanka qasacadaysan, waxyaabaha caanaha laga sameeyo, daawo, cajalado iyo cajalado fiidiyoow ah iyo waxyaabo kale.
1. Hufnaan sare iyo dhalaal wanaagsan, waxay si cad u soo bandhigi kartaa muuqaalka sheyga, waxay hagaajineysaa wacyiga dareenka, waxayna ka tarjumaysaa heerka sare.
2. Heerka yaraanshaha waa weyn yahay, illaa 75%, dabacsanaanta ayaa wanaagsan. Waxay xirxiran kartaa nooc kasta oo alaab ah. Iyo awoodda yaraynta ee saddexda lakab ee filimka wada-soo-saarka ah ee lagu daaweeyay habraac gaar ah ayaa la xakamayn karaa, kaas oo la kulmi kara xoogga yaraanshaha ee baakadaha alaabada kala duwan. Sheegasho.
3. Waxqabadka alxanka wanaagsan iyo xoogga sare, oo ku habboon gacanta, baako otomaatig ah iyo xawaare sare oo otomaatig ah.
4. Waxay leedahay iska caabin wanaagsan oo qabow waxayna ilaalin kartaa dabacsanaanta -50 ° C iyada oo aan la bilaabin. Waxay ku habboon tahay keydinta iyo daabulidda agabyada baakadeysan ee jawiga qabow.
5. Deegaanka ku habboon, oo aan sun ahayn, oo la jaanqaada heerarka US FDA iyo USDA, isla markaana raashin gelin kara.
Qalabka ugu muhiimsan ee shanta lakab ee isku-darka kuleylka kuleylka filimka baakadka leh waxaa ka mid ah LLDPE (polyetylen cufan hooseeya), TPP (ternary copolymer polypropylene), PPC (binary copolymer polypropylene) iyo waxyaabaha lagu daro ee daruuriga u ah sida wakiilka warqadda, Anti-blocking wakiilka, wakiilka antistatic, iwm. Qalabkaan ceyriinka ah waa kuwo deegaanka u wanaagsan oo aan sun ahayn, ma jirto wax gaas ama ur sun ah oo la soo saari doono inta lagu guda jiro ka shaqeynta iyo soosaarida alaabada, iyo waxqabadka sheybaarka ee alaabtu wuxuu la kulmayaa heerarka US FDA iyo USDA, waana la isticmaali karaa inaad raashin xirxirato.
Shanta lakab ee isku-darka kuleylka kuleylka filimka baakadka layaqiin ka sameysan yahay waxaa laga sameeyaa polyetylen-cufan hooseeya (LLDPE) iyo polypropylene copolymer (TPP, PPC) oo ah maaddooyinka ceyriinka ugu muhiimsan, iyadoo lagu darayo waxyaabo lagu daro waxyaabaha lagama maarmaanka u ah, laguna farsameeyo wax-ku-garaacista dharbaaxo isku-dhafan. Nidaamkeedu wuu ka duwan yahay habka wax u sameynta dharbaaxada dhaqameed, sababtoo ah sifooyinka liidata ee liidata ee dhalashada PP ee gobolka, habka wax u sameynta dharbaaxo dhaqameed looma isticmaali karo. Taabadalkeed, geedi socodka xumbo labalaabka ayaa la adeegsadaa, kaas oo sidoo kale loogu yeero geedi socodka Pulandi aduunka. Shayga ayaa dhalaalay oo laga soo saaray mashiinka, iyada oo loo marayo dhinic si gaar ah loogu talagalay co-extrusion dhinta, filimka aasaasiga ah ayaa la sameeyaa ka dibna la demiyaa, ka dibna la kululeeyaa sicir bararka labaad iyo fiditaanka si loo sameeyo alaabta
Filimka shan-lakab ee wada-qaboojiyaha kuleylka yareyn kara ayaa lagu soo saari karaa qeexitaanno kala duwan sida ku xusan arjiga. Dhumucda guud waxay u dhaxeysaa 12μm ilaa 30μm. Dhumucda caadiga ah waa 12μm, 15μm, 19μm, 25μm, iwm. Qeexitaannada ballaadhku waxay kuxiran yihiin mugga baakadka.
iska caabin qabow: Filimka baakadaha kuleylka-yareyn kara ee ka kooban shan-lakab ayaa weli jilicsan -50 ° C bilaa jab, waxayna ku habboon tahay keydinta iyo daabulidda walxaha baakadeysan ee jawiga qabow.
Waxqabadka nadaafadda: Qalabka ceyriinka ah ee loo isticmaalay shanta lakab ee wada baxda kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka kuleylka ah dhamaantood waa aalado aan sun ahayn oo deegaanka udhaxeeya, iyo habka loo adeegsado iyo adeegsiga waa nadaafad iyo sun la'aan, iyadoo la waafajinayo heerarka qaranka ee FDA iyo USDA. loo isticmaalo baakadaha cuntada.
POF filimka wax lagu shubo ee kuleylka yareyn kara wuxuu leeyahay adeegsiyo kala duwan, suuq balaaran, wuxuuna leeyahay faa iidooyinka ilaalinta deegaanka iyo sunta aan sunta ahayn. Sidaa darteed, waxaa si weyn u qiimeeyay waddamada horumaray ee adduunka. Waxay asal ahaan bedeshay filimka baakidhka kuleylka ah ee kuleylka ah ee loo yaqaan 'PVC' sida sheyga guud ee qalabka baakadaha ee kuleylka yareyn kara. Soo-saarista taxanaha alaabtan ee waddankeyga waxay bilaabatay bartamihii 1990-meeyadii. Waqtigan xaadirka ah, in ka badan toban xariiq oo wax soo saar ayaa ka jira Shiinaha, dhammaantoodna waa qalab dibedda laga keenay, wadar ahaanna wax soo saarkeedu waa ilaa 20,000 tan.
Farqiga gaar ah ee u dhexeeya tikniyoolajiyadda baakadka ee waddankayga iyo kuwa caalamiga ah ee horumarsan, dalabka saddexda lakab ee isku-darka isku-darka ah ee filimada baakadaha ee kuleylka-yareyn kara ee Shiinaha ayaa weli ku jira heer horudhac ah, baaxadda codsiguna wali wey cidhiidhi tahay, ku kooban cabitaannada, alaabada maqalka iyo muuqaalka leh, cuntooyinka ku habboon iyo in yar oo ka mid ah wax soo saarka kiimikada maalin kasta Meelo kooban, dalabka sanadlaha ah wuxuu ku saabsan yahay 2 ilaa 50,000 illaa 30,000 tan. Filimka yareyn kara kuleylka ee PVC sidoo kale wuxuu kujiraa suuq xirmo kuleyl badan, oo leh awood horumarineed oo weyn. Ka mid noqoshada waddankayga WTO iyo la midoobida suuqa caalamiga ah, tartiib tartiib ah oo loo kordhiyo shuruudaha baakadaha ee badeecooyin fara badan oo dhoofinta ah, iyo horumarinta degdegga ah ee dukaamada waaweyn ee gudaha, codsashada filimka baakadaha isku-dhafan ee saddexda lakab ah si dhakhso leh ayuu u kordhayaa Waa la sii ogaan karaa in saddexda lakab Rajada suuqa ee filimka taxaddarka kuleylka ee kuleylka wadajirka ah uu aad u ballaaran yahay.
Iskudhin Duubista Filimada, Duubista Polyolefin Pof, Yaree Filimka PCv, Polyolefin Iskudhin Heerkulka, Polyolefin Pof Shrink Film, Kala Bixinta Filimka Vs Duubista,